Ahoana ny fomba hamahana ny fikitrohana rano, fantsom-pandrefesana ary rafitra rafitra rano samy hafa-Faucets an-dakozia, Faucets famenoana pot, Faucets fandroana | WOWOW
Home / Interior design / Ahoana ny fomba hamahana ny olana amin'ny filentehana anaty rano, ny fantsona ary ny isa momba ny rafitra rano
Ahoana ny fomba hamahana ny olana amin'ny filentehana anaty rano, ny fantsona ary ny isa momba ny rafitra rano
2020 / 10 / 01 FisokajianaInterior design 6031 0
Ny rafitry ny fantson-drano ao an-tranonao dia karazana fitaovana, fantsona ary valves be pitsiny. Ny fikorontanana na aiza na aiza ao amin'ny rafitry ny fantsom-baovaonao dia mety hisy olana amin'ny antony maro. Ny tatatra mikitroka sy ny paompy ary ny fofona tsy manam-paharoa dia afaka mamadika ny fonenanao mahafinaritra ao anaty korontana be. Ny heater-drano anao dia mety misy teboka manandanja amin'izao fotoana izao izay mety hiditra miaraka amin'ny fiainanao isan'andro. Ny fananana fandroana amin'ny foibe fanatanjahan-tena dia somary mora mora kokoa noho ny toa azy!
Izahay dia efa nilahatra tamin'ny fomba marina hamerenana amin'ny laoniny ny olana mahazatra indrindra amin'ny fandroana, ka noho io fampahalalana olana io, dia miditra amin'ny teboka fantson-drano samy hafa izay mety ho tojo trano ianao.
Eto dia manantena anao fa tsy ho tonga hatramin'ny farany ny kitrokao amin'ny iray amin'ireo teboka manaraka. Na izany aza ho an'ireo izay manao izany, ity fampahalalana mahasoa ity dia eto hanampy anao.
Iza no mbola tsy nisafoaky ny riandrano sakanana? Na eo aza izany, dia matetika ny vokatry ny hadisoan'ny mpanjifa.
"Ny koban-dakozia ao an-dakozia dia mety ho voan'ny sakan'ny tavy sy sakafo sisa tavela, ary ny vongan-drano sy ny fantsakana dia mety hosakanan'ny volo misy savony sy savony fanadiovana," hoy i Don Distel, mpanara-maso mpivarotra ambongadiny ao amin'ny Progressive Service Firm any Raleigh, NC.
Manoro hevitra izy aloha hampiasa plunger hijerena ireo izay afaka mitsoka ny fanakanana. Aza adino ny mampiasa plunger mety.
"Misy karazana plungers roa ara-bakiteny," hoy izy nanamarika. Ny iray, noforonina toy ny dôma, dia natao ho an'ny hilentika, ary ny mifanohitra amin'izany kosa, izay atondrahana ary namboarina fanampiny toy ny lakolosy, dia ho an'ny bozaka. Distel dia mankasitraka bibilava manala izay azo antoka fa mibahan-toerana, satria malemy kokoa amin'ny fantsona izy ireo.
Ny varotra mpanadio ny tatatra, mitovy amin'ny Drano, na koa, mety ho manimba raha tsy mety ny fampiasana azy, hoy i Distel.
"Hanosika ny lovia fandroana ho vaky izy ireo, ny fantsom-pantsakan'i PVC ho malemy indrindra, ary ny lakaoly mitazona ny fantsom-piraisana dia azo hanina avokoa, izay afaka miala aminao amin'ny famerenana amin'ny laoniny lafo kokoa," hoy ny fanazavany.
Amin'ny ankapobeny dia mety mitaky fidirana an-tsehatra mahery vaika ny fantsonao clogged, toy ny famongorana ny entice ao anaty fantsona. Amin'izay dia ny hanomezana plumbera no filanao lehibe indrindra.
Tsy misy olona tia fofona fantson-drano fofona no ratsy indrindra.
"Io fofona maloto tsy mahasarika io dia ateraky ny etona izay miteraka tatatra rihana maina izay tsy misy rano amin'ny vela-P-pandrika," hoy ny fanazavany. Benjamin Joseph, mpiara-manorina ny Liberty House Guard. "Ny rano ao amin'ny fandrikao P dia zava-dehibe amin'ny fanaovana tombo-kase manakana ny solika solika tsy hiditra ao an-tranonao."
Ny fomba tsotra indrindra hamahana ity lafy ambany ity dia ny fitsapana ny tatatra fanaovan-tany misy anao indraindray, ary raha maina izy ireo dia nanoro hevitra i Josefa ny handatsaka rano anaty rano ho azy ireo hamerina ilay sakana hamandoana.
"Raha tsy mahasarika rano maina ilay nahavanon-doza, dia misy fotoana mety hananganana biofilm maimbo voarakitra ao anaty fantsom-panafody manafintohina," hoy i Mark Dawson, COO an'ny Plumbing Benjamin Franklin. Nanome izy fa miely be izany ho an'ireo izay manasa sakafo matetika na famatsian-tsakafo biolojika samihafa any anaty tatatra.
Ny paompy mandoaka na mitete dia manahirana noho ny antony 2: Hanosika anao handany vola be izy ireo, ary ny feo mitete, na mitete, na mitete dia mety hahatonga anao tsy hahita.
"Ny rano mitete matetika dia entin'ny triatra ao anatin'ny fanasana fingotra, ary matetika ireo mpanasa lamba ireo dia azo soloina amin'ny paompy antitra," hoy i David Moreno, mpiara-manorina ny Liberty House Guard. Na eo aza izany, eo amin'ireo paompy vaovao dia nilaza izy fa misy cartridge vita amin'ny seramika, ary tokony hosoloina ny cartridge iray manontolo.
Raha tsy azonao antoka ny singa tadiavinao dia alao aloha ny fivoahan'ny rano ao anaty faucet fa tsy ny cartridge no mivoaka ary ento miaraka aminao any amin'ny fivarotana vy any amin'ny toerana misy azy ireo ny cartridge ankehitriny hijerena raha manana solo izy ireo.
Raha te hampiditra mpanasa lamba vaovao, esory fotsiny ny «cartridge» mampiditra azy, apetraho ao ilay mpanasa lamba vaovao, ary hamafiso ny visy mitazona ny cartridge miaraka.
Teboka fanamafisana rano
Raha ny fandroana mangatsiaka fotsiny no azonao atao, mety misy fanazavana roa maninona ny fantsom-panafody misy rano eo an-tanety.
"Diniho tsara ny sakan'ny mpamaky ranoo mba hahalalana fa manana angovo ny heater-drano anao," hoy izy Kelson Carter, tompon'ny Carter's My Plumber any Indianapolis. Raha tsy izany ny olana dia nilaza izy fa tsy maintsy arahi-maso indroa ny tanko fanafanana rano ho azo antoka fa tsy mitete avy any ambany io.
"Mampiasanao ny heater-drano isan'andro ianao, ary ny fitaovana fanamafisana ao anaty heaterinao dia mihetsika sy mihena amin'ny fampiasana azy rehetra," hoy i Joseph. "Io antony io dia mahatonga ny mineraly ao anaty rano hiseho ho calcium, mamokatra petra-tsiranoka goavam-be izay mety hanimba ny heateranao rano ary hivoaka avy eo ambany."
Raha ny olana dia ny singa mpanafana ambany, nilaza i Carter fa azo ovaina izy io. Manolo-kevitra izy ny hiantso ny plumbera manana fahazoan-dàlana ho an'ireo izay tsy dia fohy amin'ny asa fanarenana.
Na izany aza ho an'ireo izay nanana ny heateranao nandritra ny elanelam-potoana lava dia mety ho fotoana fanatsarana izany.
"Raha ny mahazatra, ara-toekarena fanampiny ny fividianana heater rano vaovao amin'ny fomba tsy misy toa ny fanamboarana ny teo alohany, satria ny heateran'ny rano mahazatra dia naoty eo anelanelan'ny enina ka hatramin'ny 10 taona," hoy i Joseph.
Previous :: 'Vonjeo! Nopotehiko ny hadisoan'ny DIY ao an-tranoko mba tsy hanandrana mihitsy ao an-trano Next: Minimalism + Fotsy fotsy, fomba fanoratana zavakanto zavakanto | Geng Shang Design
2020 / 12 / 12 2145